संसद्कै हालत यस्तो… अन्त को त के कुरा गरौँ ! – Kantipur Press
काठमाडौं : राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति शुक्रबार मध्याह्न अनुगमनमा निस्कियो। सरकारी निकायको ‘सुशासन अवस्था’ हेर्नु उसको जिम्मेवारी हो। पहिलो अनुगमन संसद् सचिवालयबाटै गर्ने तय भयो।
शुक्रबार गरेको अनुगमनमा देखिएका पुरानो संसद् भवनभित्र जताततै राखेर थोत्रिएका साइकल, कम्प्युटरलगायत सरसामान र, वर्तमान संसद् सचिवालयको क्यान्टिनमा कुहेका गोलभेडा । तस्बिर सौजन्य : दिगो विकास तथा सुशासन समिति
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न दातृ निकायले संसद् सचिवालयलाई ठूलो संख्यामा फर्निसिङ र इलेक्ट्रिक सामग्री उपलब्ध गराएका थिए। आज ती सामग्री कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने सचिवालयसँग हरहिसाब त परै जाओस्, रेकर्डसम्म नरहेको पाइएको अनुगमनमा गएका सांसदले बताए। ‘विदेशीले सहयोग गरेर दिएका महँगा सामग्रीको दुरुपयोग गरेको हामीले पायौं,’ सांसद शर्माले भने, ‘अनुगमनले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। यसलाई सुधार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दियौं।’
समितिले पुरानो संसद्को अनुगमनपछि वर्तमान सचिवालयभित्रै रहेको क्यान्टिन पनि अनुगमन गर्‍यो। भान्सामा सरसफाइको कमी देखिन्थ्यो। कुहिएका गोलभेडा थिए। पकाउने भाँडाकुँडादेखि बेसन निकै फोहोर थिए। ‘क्यान्टिनको हालत हेर्दा त्यहाँको पानी पनि खान मन लाग्दैन,’ सांसद कुमारीले भनिन्, ‘खानाको गुणस्तर सुधार्न र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छौं।’ समितिले अर्काे अनुगमनमा समस्या दोहोरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संसद् सचिवालयको अनुगमन गर्ने क्रममा त्यहाँका कर्मचारीबारे पनि समितिले जानकारी लियो। सचिवालयमा तीन सय ४५ कर्मचारी कार्यरत छन्। ‘यो त ओभरस्टाफिङ हो, एक त दरबन्दी धेरै छ, अर्काेतर्फ करार नियुक्ति गरेर कर्मचारीको संख्या अत्यधिक देखियो’, समितिको निष्कर्ष छ, ‘पदाधिकारीले आफ्ना मान्छेलाई रोजगारी दिन जथाभाबी भर्ना गरेका रहेछन्।’
‘हामीले अनुगमन गर्दा अधिकांश कर्मचारी देखेनौं, काम छैन, जागिरका लागि भर्ना गरिएको छ, हाजिर गर्ने अनि जाने’, सांसद कुमारीले भनिन्।
गाडी खोइ ?
संसद् सचिवालयसँग ८२ वटा गाडी रहेको रेकर्ड छ। पुराना गाडी कहाँ गए भन्नेबारे सांसदले सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईसँग सोधेका थिए। महासचिव भट्टराईले पुराना र बिग्रेका गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मर्मत गरेर ती गाडी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयलगयत अन्य सरकारी कार्यालयको अनुगमनमा जाने बताइन्। ‘समिति सबै मन्त्रालयको अनुगमनमा जान्छ, सिंहदरवारबाहिरका सरकारी कार्यालयको पनि अनुगमन गर्नेछौं’, भट्टले भनिन्, ‘अरू कार्यालयको अनुगमन गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै संसद् सचिवालयको स्थिति के छ भनेर हेर्ने निर्णयअनुसार अनुगमन गरेका हौं। स्थिति दुःखद पाइयो।’
समितिका तीन निर्देशन
पुरानो ग्यालरी भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई प्रयोग हुन नसकेकाले ऐतिहासिक एवं पुरातात्िवक महत्वको संरक्षणको पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। उसले पुराना सरसामान (मेच, टेबल, दराज, कम्प्युटर, फोटोकपी) ले ग्यालरी बैठक र भुइँतला पूरै भरिएकाले त्यसको व्यवस्थापन तीन महिनाभित्र गरिसक्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। सचिवालयमा आवश्यक कर्मचारीको संख्या, सवारीसाधन र प्रयोग गर्ने पदधिकारीको नाम समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।